Vita Pazzapa dia miditra Raise your Voice | Hevitra MPANOHARIANA
Manaraka izany ihany koa dia tsy tiany hifanojo ihany koa ny lalao famaranana eo amin’ny fiadiana ho tompon-daka erantany amin’ny taranja baolina lavalava dia mody nasiana atsasa-pamaranana ho an’ny lehilahy sy atsasa-pamaranana ho an’ny vehivavy ny prime. Raha tadidintsika tsara angamba fa ora mitovy no nandehanan’ny famaranana rugby sy ny atsasa-pamaranana ho an’ny vehivavy, izay raha ny tena marina dia iny no saiky hanaovana ny famaranana. Izany amiko no atao hoe fahaizana mandritra sy fahaizana haivarotra ihany koa. Miaiky ny ao amin’ny rta aho amin’iny famoronana antenantenany iny.
Fa etsy ankilan’izany dia miditra amin’ny fifaninanan-kira ihany koa ny ao amin’ny mbs group. Raha teny frantsay no mahavantana ny ao amin’ny rta dia teny anglisy kosa no mahamaika ny mbs. Samy manana ny hanitra ho azy tokoa moa ny roa tonta. Fandaharana Raise your voices (noheveriko hoe global voices !) no lohatenin’ny fandaharana vaovao izay hifaninanan’ny antoko mpihira zato nahasoratra anarana voalohany. Tsy mifidy finoana ilay fifaninanana ary 60 ny isan’ny ao anatin’ny antoko mpihira iray. Mba nahita hevitra hahazoam-bola koa ny ao amin’ity vondrona haino aman-jery ity an!
Raha jereko indray ny eo amin’ny tontolon’ny haivarotra dia mahay mikendry ihany koa ry zareo. Tsy ny olona amin’ny ankapobeny toy ny amin’ny pazzapa no tratra fa izay mety ho fiaraha-mientan’ny fiangonana. Ny mpihira rahateo tsy izay mpanandrakandrana fa ankizy na olona efa niara-nianatra avokoa. Dia mirary fahombiazana amin’ity fandaharana vaovao ity ny tenako aloha!